प्रदेश २ मा एकलाख बिरुवा रोप्छौंः सुरेश मण्डल
सुजीतकुमार झा जनकपुर २ भदाै
प्रदेश २ काे सरकारले वृक्षारोपणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ । हरेक दिन प्रदेशको कुनै न कुनै जिल्लामा वृक्षारोपण भइरहेका छन् । यो अभियानको पछाडिको कारण लगायत समसमायिक विषयमा प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण राज्य मन्त्री सुरेश मण्डलसँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानीः
प्रदेश सरकारले वृक्षारोपण अभियानलाई कुन रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ ?
प्रदेश सरकारले वृक्षारोपणलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । यसका लागि हामी प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक स्थानीय तह यहाँसम्म कि प्रत्येक वडा वडामा वृक्षारोपणका लागि पुगिरहेका छौँ । भदौ ५ गते भित्रै हाम्रो एक दिन एक लाख वृक्षारोपण गर्ने योजना समेत रहेको छ । यस कार्यमा प्रत्येक जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयहरु तथा सव डिभिजन कार्यालयहरु समेत सक्रिय छन् । साउन र भदौ महिना वृक्षारोपणका लागि उपयुक्त समय रहेकाले पनि यसलाई हामीले यी दुई महिना सक्रियता एवं गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
वृक्षारोपण गर्न अभिप्रेरित गर्ने वा वृक्षारोपणको महत्वबारे जागरुकता जगाउनका लागि कुनै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ कि छैन ?
वृक्षारोपण मानव जीवन जोगाउनका लागि अति आवश्यक हो । उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय र प्रदेश सरकार गाउँ गाउँमा पुगेर वृक्षारोपणका लागि अभिप्रेरित गरिरहेको छ । प्रत्येक सडक पेटीमा वृक्षारोपण गर्नु पर्छ हाम्रो नीति रहेको छ । र यसमा जनताको सहयोग पनि हामीले पाइरहेका छौँ । प्रदेशमा खडेरी, हावाहुरी, बाढी सबैको मुख्य कारण वृक्षको अभाव नै हो भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सफल पनि भइरहेका छौँ ।
वृक्षारोपणमा जनताको सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ ?
वृक्षारोपणको कार्यमा प्रदेश दुईका जनता एकदमै अगाडि छन् । यस कार्यमा युवा क्लव, सामाजिक संघ संस्थाहरुको सहभागिता प्रशंसनीय रहेको हामीले पाएका छौँ । हामी जहाँ भएपनि फोन आइरहेको हुन्छ हामीलाई बिरुवा चाहियो वृक्षारोपणका लागि । यसले नै स्पष्ट भई रहेको छ प्रदेशको जनतामा वृक्षारोपणको विषयमा कति जागरुकता जागि सकेको छ । कुनै कुनै समयमा हामीलाई वृक्ष उपलब्ध गराउन पनि धौँ धौँ परिरहेको हुन्छ ।
प्रदेश सरकार आइसकेपछि जनता जागरुकता आएको हो कि यस अघि नै उनीहरुमा यस विषयमा जनचेतना पाउनु भएको थियो ?
प्रदेश सरकारको गठन पश्चात प्रदेश सरकारले चलाएको विभिन्न अभियान पछि जनता यसका लागि अगाडि आएका छन् । यस अघि संघ सरकारको बदनियतपूर्ण व्यवहारका कारण यहाँका जनतालाई वनको विषयमा वा वनको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारीसम्म थिएन । प्रदेश सरकार वनलाई बोर्डरसम्म लग्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यसका साथै शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम, विद्यालय, अस्पताल लगायतका स्थलहरुमा पनि वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेशका जिल्लाहरुमा वनको अवस्था कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
प्रदेशको आठ जिल्लाहरुमध्ये बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही वनको घनत्वको हिसावले राम्रै देखि रहेको छु । वन घनत्व यी जिल्लाहरुको तुलनामा बाँकी धनुषा, सप्तरी, सिरहा र महोत्तरी जिल्लाहरुमा छैनन् । यी जिल्लाहरुमा पनि महोत्तरीको त्यती खराब छैन । धनुषा, सप्तरी र सिरहामा वनको घनत्व बढाउनका लागि प्रदेश सरकार अलि गम्भीर भएर नै अगाडि बढिरहेको छ । चुरेको गुणस्तर पनि यता भन्दा उतैको राम्रो छ । फेरि संघीय सरकारको नीति पनि वन जोगाउने खालको छैन । त्यसमाथि यतै तर्फ वन फडानी पनि बढी हुन्छन् ।
तपाईले वन फडानीको कुरो गर्नुभयो, यसमा वनकै कर्मचारीहरुको संलग्नता पनि कतिपय ठाउँमा पाइएको छ नि ?
वन विभिन्न रुपमा अतिक्रमण हुँदै आएको छ । वन मास्नमा सम्बन्धित निकाय, केही ठेक्केदार, केही व्यापारीहरु यसमा संलग्न रहेको पाइन्छ । नदी नालाका कारण पनि कतिपय स्थानमा वनमा मासिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो संघीय सरकारले नै विकासको नाउँमा वन मासिरहेको छ । सडक बनाउन, विमानस्थल बनाउने कार्यका लागि संघीय सरकारले जथाभावी वन मासेर अगाडि बढिरहेको छ । संघीय सरकारमा वनलाई बचाउने चेतनाको अभाव र कानूनी खुकुलोपनका कारण पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
सागरनाथ वनको स्वामीत्वलाई लिएर तपाईको मन्त्रालयले संघ सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमै गएको छ, फेरि कानून खुकुलोपनको कुरा गर्नुभयो, प्रदेश सरकारले यसका लागि कस्तो कानूनको व्यवस्था गर्नेछ ?
जहाँसम्म सागरनाथ वनको कुरो छ मैले नै सबैभन्दा पहिले वन मन्त्री समक्ष यस विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थिएँ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश भित्र रहेको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार मातहत रह्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तैपनि सरकारले त्यसलाई हड्पने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर हामी सर्वोच्चमा गयौँ । अहिले यस विषयमा संवैधानिक अदालतमा बहस चलिरहेको छ । १८ हजार हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सम्पति हो । रह्यो कानूनको कुरो प्रदेश सरकार आफ्नै ऐन ल्याएर पनि वन अतिक्रमण हुन बाट जोगाउने छ ।
संघका पर्यटन मन्त्रीले मान्छे उतारेर पनि एक महिना भित्रै विमानस्थलको शिलान्यास गर्छौँ भनेका छन नि ?
मैले पनि सामाचारमै सुने । उहाँले १० लाख मान्छे उतारेर पनि विमानस्थलको शिलान्यास गरी छोड्ने बताउनु भएको छ । यो सरकारको कार्यक्रम हो न कि नेकपाको आमसभा जहाँ लाखौँ मानिस उतार्नु पर्छ । म त अहिले पनि यसको उत्तम विकल्प खोज्नु पर्छ । ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल वन मास्नु चानचुने कुरो होइन , फेरि विमान स्थल निर्माणका लागि त्यती धेरै जग्गाको आवश्यक्ता पनि छैन । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हुथ्रो विमान स्थल समेत २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छन् । विकल्प छैन भने ८ हजार हेक्टरमा नभई दुई हजार हेक्टर जग्गामै विमानस्थल बनाऔँ भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । त्यहाँ घरवार बसाउन, व्यापार फस्टाउनका लागि मात्रै हामीले वन मास्न दिन्नौँ ।
प्रसंग बदलौ फेरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु प्रदेश सरकारले समन्वय नै नगरी यस प्रकारको अभियान चलाइरहेको आरोप लगाउँछन् नि ?
हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढीरहेका छौँ । स्थानीय तहमा रहेका वडाध्यक्ष, त्यहाँका प्रमुख, उपप्रमुखलाई खोजेर मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ । हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
वृक्षारोपण त भइरहेको छ तर वृक्षको सुरक्षा ठूलो चुनौती रहेको छ, यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै योजना ल्याउने छ कि ?
हामी वृक्षको सुरक्षालाई ध्यानमै राखेर वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । यो दुई महिना वृक्षारोपण गरेपछि हामी त्यसको अनुगमन र नियमन समय समयमा गर्नेछौँ ।
यो आर्थिक वर्षमा कति वृक्षारोपण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ?
प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १० लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको छ । यस हिसाबले आठ वटै जिल्ला मिलाएर ८० देखि १ करोडसम्म वृक्षारोपण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०७६, १२:१२:००